လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်ဖြင့် ကိုက်ညီသော Electronics Circuit များကို ထုတ်ကုန်တခု ပြုလုပ်နိုင်သည် အထိ နိုင်ငံတကာ အတွေ့ကြုံရှိ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများဦးစီးပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခြင်း၊ Firmware ရေးသားပေးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းများကို စိတ်တိုင်းကျ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။
Electronics Product ထုတ်လုပ်ရာတွင် PCB Design သည် အလွန်အရေးပါလှသည်။ Wireless Design များ၊ Safety အတွက် လိုအပ်ချက်ရှိသည် Design များ၊ နိုင်ငံတကာ သို့ ရောင်းချနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ထားသော စံ များကို ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန် အတွက် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများတွင် PCB Design သည် အရေးကြီးလှပေသည်။ လူကြီးမင်းတို့တွင် Circuit Design ရှိထားပြီး ဖြစ်ပါက နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်သော ပစ္စည်း ဖြစ်သည် အထိ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်ပင် အကြံပေးခြင်း လူကြီးမင်းတို့၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် မည်သို့ ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကို လည်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေး အကြံဥာဏ်များလည်း တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အတွေ့ အကြုံရှိပြီး Electronics Design မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ဖြစ်သည့် အတွက် စံချိန် စံညွှန်းမှီ ပစ္စည်းများ၊ Safety အတွက် စိတ်ချရသော Design များအဖြင့် ပြည်တွင်း ဈေးကွက်သာမက ပြည်ပ ဈေးကွက်ကိုပါ ထိုးဖောက်မည့် Design များကို ထုတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်သည်။
Wireless ကို အကြမ်းအားဖြင့် ၂ မျိုးခွဲနိုင်သည်။ ၁) proprietary ၂) International Standard proprietary က ထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောပင်။ ဘယ် နည်းပညာကိုမှ Follow လိုက်နာရန်မလိုအပ် International Standard ...
Dot Product ကို အောက်ပါ အခြေအနေတွေမှာ သုံးလို့ရတယ်။ ၁) Vectors ၂ ခုက ထောင့်မှန်ကျနေသလား? Dot Product လုပ်ရင် အဖြေက ၀(zero) ထွက်လာပါမယ်။ မထွက်ရင် ထောင်မှန် မကျဘူးလို့ ...